Real Madrid Oo Calaamadsatay Saxeexeeda Ugu Horreeya Xili Ciyaareedka Iyo Qiimaha Ay Ku Heli Karto Oo La Ogaaday - Gool24.Net
Real Madrid Oo Calaamadsatay Saxeexeeda Ugu Horreeya Xili Ciyaareedka Iyo Qiimaha Ay Ku Heli Karto Oo La Ogaaday
February 14, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Real Madrid ayaa xagaaga soo aaddan dul dhigi doonta lacagta looga baahan yahay kooxaha doonaya weeraryahanka reer Argentina ee Luataro Martinez, kaas oo xili ciyaareedkan dhaliyey 16 gool.
Lautaro oo afka hore uga ciyaara kooxda Inter Milan, ayaa sida uu qoray wargeyska TyC Sports, waxa uu noqon doonaa laacibka ugu horreeya ee ay bartilmaameedsan doonto Real Madrid, waxaanu tababare Zidane la dhacsan yahay da’diisa yar iyo sida ay ugu fuddahay inuu goolal badan dhaliyo, iyadoo uu qayb weyna ka qaadanayo kubbad-dhisidda kale ee kooxda.
Sida uu wargeysku sheegtay, Real Madrid waxay sii ogtahay lacagta ay ku heli doonto 22 jirkan, waana xaddiga lacageed ee ku xidhan heshiiskiisa, kaas oo kooxda miiska saarta ay kasoo kaxaysan karayso San Siro Stadium.
111 Milyan oo Euro ayaa lagu burburin karayaa heshiiskiisa sida xogtani iftiimisay, waxaanay Los Blancos isku sii dubba-ridi doontaa lacagtaas ka hor inta aan la gaadhin xagaaga.
Jariiddada TyC waxa kale oo ay shaacisay mushaharka ay Real Madrid siin doonto Martinez oo noqon doona 14 milyan oo Euro, laakiin kooxda Talyaaniga ah ee Inter Milan oo 28 ciyaarood oo dhamaan tartamada ah oo uu xili ciyaareedkan saftay uu ud ahliyey 16 gool iyo afar uu caawiye ka ahaa, ayaa faa’iido weyn ka heli doonta dhinaca dhaqaalaha, sababbtoo ah, June 2018 ayay kooxda Racing Club de Avellaneda kaga soo iibsatay 25 milyan oo kaliya.
Martines ayaa u sheegay TyC in lix bilood ka hor intii aanu ku biirin Inter Milan uu ogaaday in Real Madrid ay doonaysay, waxaanu yidhi: “Dalabyo badan ayaan haystay, iyaguna (Real Madrid) waxay doonayeen inay ila hadlaan.”
Dhinaca kale, kooxda reer Spain ee Barcelona ayaa la sheegay inay doonayso Lautaro Martinez, kaas oo ay rabto inuu noqdo beddelka Luis Suarez oo inkasta oo uu dhaawac yahay haddana ay da’diisu weynaatay oo aan waqti badan kusii jiri karin garoomada.